Ungabanyanzela njani oorhulumente ukuba batshintshe ngelixa ungabanaki abantu? : UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	8 Novemba 2019	• 8 Comments
Sibonile kuqhanqalazo oluninzi kwezi veki zidlulileyo kwaye kuyacaca ukuba amafama amaninzi, abakhi kunye nabanye abaninzi banomsindo. Ukuba into enje iyenzeka, uya kubona ukuba abapolitiki kunye namajelo osasazo baya kwenza ulawulo lomonakalo. Iinkqubo zeTV ezinje ngeJeroben Pauw ngokukodwa ziinkosi kolu lawulo lomonakalo nakulawulo lokuqonda.
Abasebenzi abancinci bokugcina abantwana kufuneka bakhuselwe kubundlobongela babazali abanomsindo endaweni yokuba nabazali abanomsindo bakhuselwe nxamnye uhlukumezo ejikeleze umatshini ojikeleze imali-umpu apho uninzi lufumana umvuzo wokuphila, rhoqo ngaphandle kokujonga ukubandezeleka. Amajoni kufuneka akhuselwe ngabezopolitiko abakholelwa ukuba ibhombu eneneni ibulala. Ukuba amafama anomsindo, kwanenqaku lephephandaba I-1 ikulungele ukuxela ukuba abantu abaninzi base-Netherlands bakholelwa ukuba urhulumente uguqukele kumanyathelo awo aluhlaza. Ukuba konke kuphuma esandleni kufuneka uzivale ngokwakho. Kubonakala ngathi abantu abaninzi baseDatshi bavuka kuphela xa kubethe i-wallet yabo okanye umsebenzi okhuselekileyo. Ubuntu buhlala bubonakala buhamba kunye nomsebenzi wakhe okanye umsebenzi wakhe, kodwa ukuba i-wallet okanye ukhuseleko lwayo lubethe, kungcono ukuba uvukele.
I-2019 Ngokukodwa, ngunyaka apho onke amaqela eengcali ezisebenza ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo kurhulumente ebonakala esongelwa, ehlaselwa okanye ebulewe. Ayingabo abameli kuphela, kodwa ngoku kunye nabahloli, abasebenzi bokukhathalela ulutsha kunye neentatheli kufuneka bafumane ukhuseleko lukarhulumente. Ngaba oko kuthetha into malunga nobungakanani benkqubela phambili eyenzekayo eluntwini kwaye ke kungakanani ukubandezeleka komntu kubangelwa? Iintatheli ngamaxhoba amaqela ezolwaphulo-mthetho, kodwa oko kubonakala ngathi kujolise ekuvumeleni abasasazi bobuchwephesha ukuba baqhubeke nokuvelisa iindaba zabo ezingezizo ezingekho mthethweni. Awunazinto? Ewe, kunjalo, isekwe kakuhle, kuba ngenxa yamabali ale ntatheli kunye nabaphathi bembono kule minyaka idlulileyo, ngoku sinengqina elingaziwayo lesithsaba okanye umthombo ongaziwayo kwaye ngokuqinisekileyo yonke into inokwenziwa kwaye ivavanywe ngamajelo eendaba ngoku inikezela ukumiswa koluntu.
Ukuba izinto zivela kancinci, uhlala uhlelele inkcaso ngendlela yeemanyano zabasebenzi kunye neentlanganiso zezopolitiko. Ngokuqinisekileyo uyakukhumbula ukuba uWim Kok waba kanjani kwezopolitiko ophuma kwinkokeli yomanyano lwabasebenzi. Imibutho yabasebenzi ikhona ukuze kubekho ukunganyaniseki eluntwini kuphume isitya ngendlela elawulwayo. Oku kuyasebenza nakwiqela lezopolitiko nakumadoda abo angaphambili. Lonke uluvo kuluntu lungalinganiswa ngeenkqubo ezinkulu zedatha okanye amanani okubukela kwaye anokuphembelelwa ngerediyo, iTV kunye nemikhosi yeendaba zentlalo ezisa ingxoxo. Kwaye ukuba isoyikisa ukuhamba kancinci, uthumela umntu wezopolitiko kwisiphathamandla sakhe esibizayo semousine kwisuti kwaye ehamba neekhamera ezininzi ukoyisa abantu ngentetho enoboya, ebonisa oko kuthiwa kukuqonda, kodwa umyalezo ukhona Intsalela yeiyimfuneko kwaye kufuneka senjenjaloMsgstr ". Ngaba ucinga ukuba uMark Rutte uxhalabele isipaji sakho okanye impilo yakho? Ngaba ucinga ukuba umntu wezopolitiko okanye umphathi obona ohlawulelwa kakhulu kwi-tube unomdla kwintlalo-ntle yakho? Hayi.
Ke ukuba sifuna ukutshintsha into eluntwini, ke akufuneki sibambe ii-pitchforks kuphela ukuba ziyazibetha, kodwa lixesha lokuba siqale ngokujonga eyona nto iphosakeleyo. Ukuze ufumane oko kufuneka ujonge ngaphaya kwemithombo yeendaba kunye nezopolitiko. Jonga ngaphaya kwempumlo yakho. Oku ikakhulu kuchaphazela utshintsho olusisiseko kuthi, indlela olibona ngayo eli lizwe kunye nendlela esidlalwa ngayo ngokulula. Ukuba siqala ukubona ngazo zonke iindlela esidlalwa ngazo kwaye sisetyenzisiwe, singawutshintsha umbandela kwinqanaba elisisiseko. Oko akunakwenzeka ngokubeka i-tipp-ex kwiscreen. Ngale nto kufuneka sichaze unobangela. Kufuneka senze ubuqhophololo kunye nenkohliso zonke iziseko ukubona ngokusebenzisa inkqubo kwaye ujike kubuqhetseba nenkohliso. Ngokusisiseko asithethi nje ngezobupolitika, abaphathi bokujonga imidiya (abafana noJeroben Pauw, uMatthijs van Nieuwkerk, njl. Njl.) Kodwa nangoku malunga nenkcaso kwezopolitiko, kwimibutho yabasebenzi nakwindlela yokungena eluntwini.
Kwincwadi yam entsha ndixoxa ngazo zonke iileya zenkohliso kwaye ndiza nesisombululo esenziwe ngokucacileyo. Lixesha lokuba uthathe inyathelo kwaye ukuba ingene inyathelo kuqala ngokubona kuzo zonke ezi zinto zocwangciso ngokwenyani njengoko sicinga ukuba siyazibona. Ngaba uyafuna ukuthengisa incwadi yakho iVrijland? Kudala ndibhala i-7 kule webhusayithi ngokuzithandela kwaye indibize kakhulu. Nangona kunjalo, andinakuyishwankathela le minyaka ingcono ye-7 kunencwadi, kungoko ndiye ndayithatha ingxaki. Ngokufutshane kunye nenqaku, kodwa iglasi icacile kwaye ibhaliwe phantsi ngothando. Ndibeka amandla amaninzi kuyo, kuba kuluvo lwam into eneneni kufuneka itshintshe. Lixesha lotshintsho olukhulu kwezentlalo kwaye lunokuza kuphela xa amehlo evulekile ngokuqaqambileyo kwaye ngandlela zonke. Ndenze okusemandleni am. Hlala uthi cwaka okanye ushukume. Ngaba uthatha inxaxheba?
Geert Wilders igosa elilawulwayo
8 Novemba 2019 kwi-15: 19
Ndicinga ukuba uqhankqalazo esele lukhona lukhona.
Yintoni evelise uqhanqalazo! Nada. Ukuba uyaqhankqalaza kuya kufuneka uqhubeke de uzuze okuthile kwaye kumnyama kumhlophe. Ngaphandle koko i'elite 'yabafuduki iyakuhlekisa ngawe kwaye sele bethathele ingqalelo uqhanqalazo oluncinci kwi-script yabo ukuba ngolunye usuku loqhankqalazo.
8 Novemba 2019 kwi-16: 06
Ngapha koko, kusenokwenzeka ukuba banazo ii-pawns zabo emhlanganweni ..
"Eyona ndlela ilungileyo yokulawula inkcaso kukukhokelela ngokwakho"
8 Novemba 2019 kwi-16: 34
Kulungile, yindlela esebenza ngayo, kodwa njengoko benditshilo ngaphambili, "ngethamsanqa siphila" kumgaqo womthetho. " Ukukhohlela.
Thelekisa imeko yangoku njengomxube wesimo sikaGeorge Orwell kunye nelizwe elitsha elinesibindi likaHuxley. Umxube omnandi, i-cocktail, awuyi kuphoswa. I Cheers Guys iyaqhubeka nokusebenzisa iskripthi sakho.
Xa bendindwendwela abazali bam ndabona okulandelayo kumabonwakude:
Kuthathe ixesha ngaphambi kokuba ndiqonde ukuba kutheni kukho impendulo enjalo ehlabayo kunye neemvakalelo (kwaye kwimbono yam engenantsingiselo) impendulo kwesi sihloko nguRenske Leijten. Ekugqibeleni kuphathelelene neqela elincinci labantu i-8500 elibacaphukisayo, kodwa kukho ukuxhatshazwa okukhulu kurhulumente. Kude kube ngumzuzu we-22: I-05 le ndlela yokubonisa imeko yaphindeka yaphindwa yenziwa ngumgcini-nkcazo: "Kodwa kubi kangakanani, lo rhulumente ngulowo uguqukela kubemi bakhe". Into endithetha ngayo yile yokuba urhulumente kufuneka abakhusele abemi bawo kodwa asilele ukwenza njalo.
Simfumene phi umphathiswa ebhengeza loo msindo? "Urhulumente ukhona ukukhusela abemi beli kwaye akaphumelelanga kakhulu."
Ngamanye amaxesha ndiye ndicinge indlela ezisebenza ngayo ezi ndlela zisetyenzisiweyo. Abazali bam babekwindlela iphela "yehlazo !!". Ngamanye amaxesha ndingathanda ukucacisela abazali bam ukuba ingqwalaselo yabo iphambuka njani kwinto eyenzekayo ngokuqhubeka ngokunzulu kumxholo omncinci kodwa onemvakalelo.
Okwangoku ndiyekile ezo nzame. Ukuba i-psycholance iyenza ibonakale (ifikeleleke ngeenombolo zomnxeba i-11-11, intle, iphindwe kabini inamba yokuhlanya, i-lache!) Ndiyoyika ukuba ndiza kubizwa kwasekuqaleni ...
12 Novemba 2019 kwi-00: 44
“Izithuthi ezifanelekileyo ziyafuneka kuba abantu abangakhange benze tyala lolwaphulo-mthetho abayiyo inqwelo mafutha Ukongeza, i-ambulensi ayisoloko ingekho kwimeko. Ngokusebenzisa izithuthi ezifanelekileyo, aba bantu bahanjiswa ngobuchule kwindawo ekhuselekileyo, emnandi, engenacala. Inkxaso-mali ikhutshelwe umqhubi ofanelekileyo othuthwe yi-ZonMW ixesha elingangonyaka. Ngeli xesha, iya kubekwa esweni ukuba isetyenziswa kangakanini kwaye nini isithuthi esifanelekileyo. Kwaye kwenzeka le nto ngabantu abathuthwayo: abantu abanokuziphatha okubhidekileyo kunye nabathandekayo babo. "
Yiza eGeorge Orwell ... ubuyithetha le nto ngentetho entsha?
"Uthuthwe ngendlela ekhuselekileyo, emnandi, engenamkhethe, esebenzayo"
12 Novemba 2019 kwi-00: 51
12 Novemba 2019 kwi-01: 13
Damn, ndandingazi ukuba into enjalo yayiqhutywa! Ngethamsanqa ndihlala kwintshona yelizwe!
Isiniki maxabiso esivela kwinqaku elingasentla:
Nangona kunjalo, amapolisa kufuneka abeke iliso kwisengqondo rhoqo. Emva koko iarhente iqhuba ikhusela abasebenzi. Kunyaka wesibini i-psycholance iqhuba, ukunyuka okuncinci kobukrakra kunokubonwa. "Ewe kunjalo kuba siqhuba ngaphezulu, kodwa amapolisa ayazi apho angasifumana khona," ucacisa uHendriks. Kwaye njengasekuhlaleni, kubakho ukwanda komsindo nathi.
Ummelwane wam wangaphambili usebenze njengomzalwana we-ambulensi ubomi bakhe bonke. Ndibuze ukuba luyanda na uxinzelelo kubasebenzi be ambulansi? Impendulo yakhe yayicacile: “Hayi, ibisala ngokufanayo kuyo yonke loo minyaka. Umahluko kukuba ngenxa yesmsthpone kunye namajelo eendaba ezentlalo, oogxa bam ngamanye amaxesha bayaziswa ngaphambi kokuba ndibuyele e-barrack.
12 Novemba 2019 kwi-10: 19
Ewe, abantu abaninzi sele bethathiwe kwiglasi ye-GGZ
« Yintoni kanye le ngxaki yeNitrogen, kutheni amafama ekhalaza kwaye kutheni kuncitshiswa isantya?
Inyathelo lokuqala kukulebhelisha, inyathelo lesibini kukhutshelwa ngaphandle: iqhosha lokugonya »
Iindwendwe ezipheleleyo: 13.777.303
guppy op Sele luqalile uhlaselo? I-Psycholance yayisele inikezwe ukukhanya okuluhlaza kwi-2018 esekwe kwimeko ye-Els Borst / Bart van U.
Ilanga op URobert Jensen "UDonald Trump akakholelwa kwi-New World Order" uqinisekisa: IJensen.nl ilawulwa ngokuchaseneyo
Chekinah op Sele luqalile uhlaselo? I-Psycholance yayisele inikezwe ukukhanya okuluhlaza kwi-2018 esekwe kwimeko ye-Els Borst / Bart van U.
SandinG op Ingqina lesithsaba kunye nomdlalo ophakathi kolwaphulo-mthetho lukarhulumente kunye nommeli (Igqwetha lokulingana ngokuchasene nePlasman)